5 Diiwaan Oo Ay Dhigeen Duufaanta Matthew | Saadaasha Shabakadda
5 rikoor oo ay dhigtay Hurricane Matthew
Sergio Gallego | | Duufaannada
Duufaanta Matthew ayaa ku dhufatay maalmahan ugu dambeeyay burbur iyo maadaama xeebta bariga Mareykanka oo dhan aan lagu arag muddo dheer.
Waa duufaan hal toddobaad gudihiis ku guuleysatay inay jabiso 5 rikoor iyo inay ula jeeday khasaarooyin badan oo isugu jira heer shaqsi iyo mid maadadeed oo ay adkaan doonto in la dayactiro muddo dheer.
Waa duufaantii ugu cimriga dheeraa ee bishii Oktoobar ka dhacda aagga Atlantic. Ilaa hada, diiwaanka waxaa haysay duufaantii Iván, oo dhulka soo dhigtay 2004-tii oo qiyaastii 10 maalmood jirtay. Waxay ahayd 9 sano tan iyo markii badweynta Atlantika ay dhibaato soo gaadhay oo ay la kulantay duufaan ka tirsan Qaybta 5.
Duufaanta Matthew waa duufaantii ugu horreysay ee Qeybta 4 ee soo gaarta Haiti qiyaastii 52 sano. Rikoorkii hore waxaa qabtay Hurricane Cleo 1964. Duufaantan ayaa ah tii ugu horreysay ee la diiwaan geliyo inay sameyso dhul ballaaran oo ku yaal Cuba, Haiti iyo Bahamas.
Sawir - Reuters
Duufaanta Matthew, oo ka bilaabatay 29-kii Sebtember, Waa duufaantii ugu dheereyd Nooca 4 0 5 taariikhda ee dhammaan aagga Bariga Caribbean-ka. Kuwani waa qaar ka mid ah diiwaanka duufaantii cajiibka ahayd ee Hurricane Matthew ay ku jabisay dhammaan wadiiqooyinka Atlantic. Maanta, kumanaan dad ah ayaa ku dhintay duufaantaan cajiibka ah ee halakeysay aagagga Haiti, Cuba iyo Mareykanka. Maalmihii la soo dhaafay, duufaanta waxay noqotay duufaan ka dambeysa kuleylka, iyadoo lumisay qeyb ka mid ah xooggeeda. Marka laga reebo tirada dhimashada, malaayiin dad ah ayaa looga tagay guri ay ku noolaadaan iyo khasaarooyin badan oo heer maadi ah. Shaki la’aan, Hurricane Matthew waxay ahayd mid kamid ah kuwii ugu waxyeellada badnaa sanadihii ugu dambeeyay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Duufaannada » 5 rikoor oo ay dhigtay Hurricane Matthew
Waa maxay noocyada duufaannada 'tornaado'?